डा. दिक्षितभन्नुहुन्छ : महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । – Yuwa Aawaj
चैत्र ६, २०७७ शुक्रबार 391
काठमाडौं : नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरम’णि दिक्षितले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमा जानको लागि मरिहत्ते गर्न नहुने धार’णा राखेका छन् । र, अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको लागि सबैभन्दा उ’त्तम पात्र जनता
समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर हुने पनि उनको भनाइ छ । उनले अहिले पार्टीहरु झै’झग’डामा लागेको टिप्प’णी गरे । काठमाडौंमा आयोजित एक सा’क्षात्कारमा उनले दलका नेताहरु झै’झग’डामा उत्रि’एकोले देश समस्यामा परेको सुनाए ।
उनले सबै दलभित्र अहिले आ’न्तरिक झ’गडा रहेको दा’बी गरे । उनले भने, ‘नेकपा एमलोभित्र झ’गडा छ । संसदमा स्थिरता देखिँदैन् । उनीहरु झगडा गरुन् न, हामीले के पायौं त ? हामीले त नेकपालाई दुई तिहाई मत दिएका थियौं । हामीले खोजेको कुरा यही हो त ? एउटा नेतापनि चो’खो छैनन् ।
सबै नेता नाँग्गै छन् । प्रतिपक्षीले पनि काम गर्न सकेन् । नेपालीले केही पाएनन् ।’ डा. दिक्षितले देश अहिले ख’त्तम अवस्थामा रहेको सुनाए । मुलुकमा रोजगारी नभएकोले लाखौं युवाहरु विदेशिन बाध्य भएको सुनाए । उनले भने, ‘मुलुकमा रोजगारी छैन् ।
युवाहरु विदेशिन बा’ध्य भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले चु\_नावमा जान संसद विघटन गर्नुभयो । तर, स’र्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय उ’ल्टाईदियो । अहिले संसद चलेको छ । अब के कार्यक्रम लिएर अघि बढ्छ ? त्यो हेर्नुपर्छ ।’
ओलीजीले आफ्नो सरकार निरन्तरता चाहने हो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ अवस्था अहिले आएको सुनाउँदै यदि विश्वासको मत लिन ओली असफल भए अर्को सरकार बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले तत्काल चु’नावमा जान नभनेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको ने’तत्व लिन लो’भ देखायो भने कांग्रेस पनि पुरै नाँ’ग्गिने उनको भविष्यवाणी छ । उनले भने, ‘अहिले मुलुकलाई असल प्रधानमन्त्री चाहिएको छ । हामीलाई एकदमै असल प्रधानमन्त्री चाहिएको छ । ठूलो प्रोगाम चलाउनु छैन । स्थिरता विश्वासका साथ लग्नुपर्छ ।’
उनले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘महन्थजी कांग्रेसबाट आएका हुन् । उनमा भ्र’ष्टाचारको दा’ग छैन् । भारतको नरसिंह रावजस्तै हुन् । सबैलाई मिलाएर लैजाने व्यक्ति हो । प्रधानमन्त्री बन्ने होड’बाजी पनि छैन् ।
संसदको झै’झग’डा हुँदैन् । कांग्रेसले पनि यो कुरा मानिदियो भने, ओलीजीले पनि मानिदिए भने राम्रो हुन्छ । जसपामा उपेन्द्र यादव, राजन्द्र महतो पनि छन् । तर, मुलुकको लागि उपेन्द्र र राजेन्द्र भन्दा ठाकुर नै उपयुक्त हुन्छ ।
अगर ओलीले मत पाउन सक्नुभएन भने, कांग्रेस यता लाग्नुहुँदैन् । ठाकुरले सबै दलललाई मिलाएर सरकार बनाउनुपर्छ । चु’नावी सरकार हुन्छ । सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्छ । मैले त यही निकास देखेको छु ।’
उनले संसदले सरकार बनाउने कुरामा पटक्कै विकल्प दिन सकेन भने मुलुक चुना’वमा जान सक्ने पनि बताए । तर, तत्का’ल चु’नावमा जाने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले नेकपा (एमाले) फुटोसा वा एक होस त्यो आफूहरुलाई मतलबको विषय नभएको पनि टिप्प’णी गरे । उनले जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको पनि दा’बी गरे ।
Posted in Hot News, ताजा समाचार
Prevउद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोल्छा भन्नुहुन्छ : वर्षमा चार लाख युवालाई रोजगारी दिइन्छ ।
Nextकहिले देखि आउदै छ चर्चित पत्रकार रबि लामिछानेको टिभी च्यानल संचालनमा? यस्तो छ तयारी !
पुरूषहरुमा बाँ’झोपनको ख’तरा कति हुन्छ? (भिडियो सहित)
खुशीको खबर : आईपिएलमा १० टिम हुने, सन्दिप लामिछानेले पनि मौका पाउने संम्भावना ।